Hill Climb Racing အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - APKTom
ဒေါင်းလုပ် APK（72.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Hill Climb Racing
မူရင်းဂန္ထဝင်ဟေးလ်ကိုတောင်တက်ပြိုင်ပွဲတွင်ကစားပါ။ ဤရူပဗေဒအခြေပြုယာဉ်မောင်းဂိမ်းတွင်သင်၏လမ်းပေါ်ရှိတောင်ကုန်းကိုတန်းတူညီမျှပါ။ Playable offline!
Newton ဥပဒေကြမ်း, သူသည်မည်သည့်နေရာတွင်မတွေ့ဖူးသည့်နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားမည့်ခရီးကိုသူသွားတော့မည်ဖြစ်သည်။ Ragnarok ကနေနျူကလီးယားစက်ရုံတစ်ခုအထိနေရာတွေအားလုံးဟာဘီလ်ကိုပြိုင်ကားလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲ။ ရူပဗေဒနိယာမများကိုအနည်းငယ်လေးစားမှုနှင့်အတူလပေါ်၌အမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းများကိုမအောင်မြင်မှီတိုင်အောင်ဘီလ်သည်အနားယူမည်မဟုတ်ပါ။
ကွဲပြားခြားနားသောကားများနှင့်အတူထူးခြားသော Hill တောင်တက်ရန်ပတ်ဝန်းကျင်၏စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရ။ ရဲရင့်သောလှည့်ကွက်များမှအပိုဆုကြေးများရရှိပြီးသင်၏ကားကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်အကွာအဝေးများသို့ပင်ရောက်ရှိရန်ဒင်္ဂါးများကိုစုဆောင်းပါ။ သတိထားပါ - Bill Stout လည်ပင်းသည်သူငယ်ငယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ နှင့်သူ၏ကောင်းသောဓာတ်ဆီ crematorium လောင်စာဆီအလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်ပါသည်။
features: br> br >> •အော့ဖ်လိုင်းကစားခြင်း - Offline Play - Offline Play-•ယာဉ်များ - 29 ယာဉ်များကိုသော့ဖွင့်ပြီးအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ Playstyle အတွက် - •🔧 Upgrade - သင်၏မော်တော်ယာဉ်များကိုအင်ဂျင်, ဆိုင်းငံ့ခြင်း, တာယာများနှင့် 4WD တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ •⛰️ drive - စာသားအရအဆုံးမဲ့ဖြစ်သည့်အဆင့် 28 ဆင့် သေးငယ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ
🛠 garage mode - သင်၏အိပ်မက်မော်တော်ယာဉ်ကိုဓလေ့ထုံးစံများကိုတည်ဆောက်ပြီးမောင်းနှင်ပါ။ Tour ည့်ဘတ်စ်ကား, ပြိုင်ကားတစ်စီး, ရဲကား, လူနာတင်ယာဉ်, မီးသတ်ထရပ်ကား, ဆီးနှင်းစက်စက်, စူပါတောင်တက်ခြင်း, BR>
သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲဖတ်နေပြီးယာဉ်အသစ်များ, အဆင့်များ, အင်္ဂါရပ်များနှင့်သင်မဆိုပြ issues နာများကိုပြုပြင်ခြင်းကိုဖန်တီးသည်ကိုသတိရပါ ay find ။ ဒါကြောင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသို့မဟုတ်မကြိုက်သည့်မည်သည့်ပြ issues နာများနှင့်ပြ issues နာများနှင့်သင်ကစားနိုင်သည့်မည်သည့်ပြ issues နာများနှင့်မဆိုပြ issues နာများနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ပြ issues နာများနှင့်မဆိုမည်သည့်ပြ issues နာများနှင့်မဆိုပြ issues နာများနှင့်မဆိုမည်သည့်ပြ issues နာများနှင့်မဆိုပြ issues နာများနှင့်မတူပါက ကျေးဇူးပြု. သင့်စက်ကိရိယာပါ0င်ပါ။
BR> * Facebook: https://www.facebook.com/fingersoft: Twitter: https://twitter.com/hcre_official_
privacyer ပေါ်လစီ: https://fingersoft.com/privacy-policy/
အမူအကျင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အရပိုင်ခွင့်အရ - လက်ချောင်းများ Ltd. ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
Hill Climb Racing - Gameplay Walkthrough Part 40 - All Cars/Maps (iOS, Android)
Maze map please